Isibhengezo sengeniso eyongezelelweyo | Ezezimali
Ingxelo yengeniso ehambelanayo
Xa abantu beyokwenza i irhafu yengenisoNgamaxesha amaninzi, bayazenza iimpazamo (ngakumbi xa beziveza amaxesha ambalwa okuqala) ngenxa yokusilela kokuziqhelanisa okanye ukungazi. Xa sijamelana nolu hlobo lwengxaki ngaphambili, into ayicelayo kuthi kukuba senze i ingxelo eyongezelelweyo yengeniso, ukuze idatha esiyibeke ngendlela engeyiyo ilungiswe kwaye amanani achane ngokuchanekileyo.
Ingxelo yengeniso eyongezelelweyo yingxelo elungisa eyona yokwenyani.
1 Yintoni ekufuneka ibonisiwe kwimbuyekezo yokuhlawula irhafu
2 Ngoobani abagunyazisiweyo ukuba benze ifayile yokubuyisela
3 Iindidi zeengxelo ezongezelelweyo
4 Ukuba isibhengezo asifakwanga
5 Ukuba ayihlawulwanga ngexesha elibonisiweyo
6 Ukulungiswa kwedatha enxulumene nokumiselwa kweerhafu okanye ukuhlawulwa
7 Zingaphi izibhengezo ezongezelelweyo ezinokwenziwa?
8 Ngaba izibhengezo eziNcedisayo zivelisa imbuyekezo?
9 Intlawulo eNtsha eKhankanyiweyo yokuNcedisa
Yintoni ekufuneka ibonisiwe kwimbuyekezo yokuhlawula irhafu
Ukwenza isibhengezo esongezelelweyo, iimfuno ezisisiseko kufuneka zibandakanye inombolo yokuthengiselana okanye inombolo yephepha elinikezelweyo, ukongeza kumhla apho amaxwebhu aza kongezwa khona.
Izihlomelo abaza kongeza kuzo nazo mazibandakanywe, kubandakanywa nengcaciso emayilungiswe. Kuya kufuneka ubandakanye zonke Idatha yomntu uzakwenza ntoni ingxelo kunye nesishwankathelo Isihlomelo sifakiwe.
Injani i iingxelo ezongezelelweyo ngokwetyala ngalinye
Ngeenjongo zokugcwalisa imbuyekezo eyongezelelekileyo ngokhetho lwe “ukuguqulwa kwezibhengezo""isibhengezo singasebenzi"Okanye"ukubuya akufakwangaOku kulandelayo kufuneka kwenziwe:
Ukulungiswa kwezibhengezo. Kule meko, kufuneka ingeniswe ukuze kutshintshwe ulwazi kwingxelo esele ingenisiwe, okanye ukongeza ulawulo okanye uxanduva kwisiteyitimenti.
Isibhengezo ngaphandle kwempembelelo yesibhengezo. Olu khetho lusetyenziselwa ukucima yonke imbuyekezo esele siyigcwalisile okanye ngaphezulu kwembuyekezo enye.
Isibhengezo asifakwanga. Olu khetho lunokuboniswa ngendlela eyahlukileyo xa umntu oyinikelayo eyichithile isibhengezo okanye iingxelo.
Izibhengezo zangaphambili ze-schema. Kule meko, imbuyekezo eyongezelelweyo inokufakwa ukuze kulungiswe imbuyekezo eqhelekileyo yesiqhelo okanye kulungiswe nembuyekezo eyongezelelweyo.
Ngoobani abagunyazisiweyo ukuba benze ifayile yokubuyisela
Izibhengezo ezihambelanayo ngokoluvo. Kwimeko apho kuqhutywa khona emva kwembono zerhafu enye okanye ngaphezulu iinxalenye zesibhengezo esele sichaziwe kufuneka zilungisiwe.
Ukuncedisa ukulungiswa kwezemali. Oku kwenziwa xa ugunyaziwe werhafu esenza ukungqinisisa imbuyekezo kwaye umhlawuli werhafu unyanzelekile ukuba atshintshe imbuyekezo ngexesha lokuphononongwa.
Iindidi zeengxelo ezongezelelweyo
Ngaphakathi iingxelo ezongezelelweyoKukho iintlobo ezi-4 ezinokwenziwa, kuxhomekeke kuhlobo lwedatha ekufuneka ilungisiwe.
Ukuchazwa ngokuchanekileyo kweempazamo eziqhelekileyo
Esi sibhengezo songezelelweyo kufuneka senziwe xa bekufuneka ukuba into ebhengeziweyo ishiywe, xa intlawulo ingakhange yenziwe ngalo mhla ubonisiweyo okanye xa idatha enxulumene neentlawulo okanye iirhafu izakutshintshwa.
Ukuze ndikhuphe oku ingxelo eyongezelelweyo kwifom echanekileyo, into ekufuneka yenziwe yile ilandelayo:
Ngena kwiwebhusayithi ye-hacienda kwaye ukhethe ukhetho lwenkqubo. Emva koko kufuneka siye kwindawo yokubhengeza. Xa sele ulapho, kuya kufuneka ukhethe intlawulo ekubhekiswa kuyo kwaye ubeke ifayile ye Iphasiwedi yobuqu yeakhawunti ye-hacienda kunye ne-RFC.
Emva koko kufuneka ukhethe intetho yesibhengezo kwaye isinike ukuhambelana. Ngoku ungakhetha impazamo ofuna ukuyilungisa kwimbuyekezo yakho uze uyithumele kwi-Ofisi kaNondyebo ukuze bajonge ukubuya kwakho. Nje ukuba kuqinisekiswe, baya kuba nakho ukunxibelelana nawe ngendlela efanayo kwaye Baza kukuthumela isiqinisekiso sokwamkelwa.
Ukuba isibhengezo asifakwanga
Kwimeko apho isibhengezo sishiyiwe, kufuneka ufake intlawulo ekhankanyiweyo kwaye ukhethe ukhetho lokufaka ifayile ukubuya. Kuya kufuneka ubeke umhla owawunokubhengeza ngawo kunye nohlobo lwesibhengezo esi (kulo mzekelo kufuneka siphawulwe njengesibhengezo esincedisayo). Emva koko ucofe ukhetho lweMbophelelo engaboniswanga.
Okwangoku, uxanduva olubonisiweyo luya kuvela kwiscreen sakho, kunye neerhafu. Kuya kufuneka ukhethe ukuba zeziphi ofuna ukuzenza.
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo amasimi anikwe amandla kunye nohlaziyo kunye neerhafu ezingaphezulu ukuza kuthi ga ngoku. Emva koko, yenza intlawulo ngogqithiso okanye kwifestile yebhanki. Thumela kuHacienda ikopi yentlawulo.
Ukuba ayihlawulwanga ngexesha elibonisiweyo
Kwimeko apho ingxaki kukuba ungahlawulanga ngexesha olityala ngalo, kuya kufuneka ubambe kwi-Intanethi.
Ngenisa ukhetho lokuhlawula ekubhekiswa kulo kwaye ufake ukufayilwa kwesitetimenti. Emva koko kufuneka ufake ixesha apho intlawulo ebifuneka ingakhange yenziwe kwaye ukhethe ukhetho lwesibhengezo esongezelelweyo.
Ngoku khetha ukhetho lokuguqula izibophelelo kwaye emva koko uthathe umfanekiso-skrini wexabiso lezihlawulelo kunye nohlaziyo oluzakuvela kwiscreen.
Thumela idatha kwi-hacienda kwaye baya kukuthumela idatha kunye nomhla omtsha wokuhlawula kunye nemali entsha ekufuneka uyifakile.
Ukulungiswa kwedatha enxulumene nokumiselwa kweerhafu okanye ukuhlawulwa
Kule meko, kuya kufuneka ufake intlawulo ekubhekiswa kuyo kwiwebhu kwaye ungenise ingxelo. Emva koko, kuya kufuneka ubeke ngaphakathi kwisibhengezo oza kulungisa kancinane. Kuya kufuneka uye kwicandelo lokumiselwa kwerhafu kwaye iwebhu iya kusibonisa ngokuzenzekelayo idatha egcwalisa isibhengezo sethu.
Zingaphi izibhengezo ezongezelelweyo ezinokwenziwa?
Nangona abantu benokwenza ukuya kuthi ga Iingxelo ezi-3 ezongezelelweyo ngaphandle kwengxaki, Kukho iintlobo ezithile zokubhengezwa apho isibhengezo esongezelelweyo singenakwenziwa naphantsi kwazo naziphi na iimeko.
Kwimeko apho ixesha lokuhlawula kwi-intanethi liphelelwe lixesha kwaye idatha yolungiso kunye nohlaziyo iyaguqulwa.
Izibhengezo ezincedisayo ezinikezela ngolungiso lwentlawulo okanye umbono weerhafu.
Kwimiqolo efanayo, kungeniswa imbuyekezo emithathu epheleleyo, ukuba kunjalo kula matyala alandelayo.
Xa umvuzo womntu okanye ixabiso lomsebenzi wabo lonyuka.
Xa ilahleko okanye ukuncitshiswa komntu kuyehla okanye kunciphisa iimali ezinokuhlawuleka okanye iintlawulo zokubambisa.
Kwimeko apho umthetho ufuna ukuba umntu angenise ingxelo entsha eguqula eyokuqala.
Ngaba izibhengezo eziNcedisayo zivelisa imbuyekezo?
Abantu abaninzi bayazibuza ukuba yenza isibhengezo esongezelelweyo, Kungenzeka ukuba i-ofisi yerhafu iya kukubuyisela i-% kwaye impendulo ngu-ewe, okoko nje ukubuya okutsha kuyinzuzo kulowo ubuyayo.
Xa ukwi Isicelo sokubuyisa Kukho iimpazamo ze-arithmetic kuphela ekumiseleni isixa esiceliweyo, abasemagunyeni kwirhafu baya kubuyisa iimali ezihambelana nazo, ngaphandle kokufuneka ukuba benze ingxelo eyongezelelweyo. Abasemagunyeni bangabuyisa imali esezantsi kunaleyo bebeyicelile kubahlawuli berhafu ngenxa yohlolo olwenziwe kumaxwebhu anikiweyo. Kule meko, isicelo siya kuqwalaselwa saliwe liqela elingabuyiswanga, ngaphandle kwemeko yezibalo okanye iimpazamo zefom.
Kwimeko apho abasemagunyeni babuyisa isicelo sembuyiselo kubahlawuli berhafu, kuya kuqwalaselwa ukuba saliwe ngokupheleleyo. Ukulungiselela ezo njongo, abasemagunyeni kwirhafu kufuneka baseke kwaye baxhase izizathu ezithi zixhase inxenye okanye ukwala okupheleleyo kwembuyekezo efanelekileyo.
Ukulungiselela ezi njongo, siyabona ukuba akuyomfuneko ukuba kukho impazamo kubalo, kodwa le yinto engazange yenzeke.
Ngoku, kufuneka sazi ukuba umthetho uyacacisa ukuba xa a irhafu yetyala okanye igalelo lenkxaso kwaye isibhengezo esongezelelekileyo sibonisiwe apho igalelo lithe lacuthwa, ukubuyiselwa imali kuya kwenziwa kuphela kumhlawuli werhafu ukuba intlawulo yenziwe ngendlela echanekileyo.
Oko kukuthi, unokufikelela ekubuyiselweni kwemali kuloo mali, kodwa ngenxa yoku, irhafu kufuneka ukuba ihlawulwe kwangaphambili. Ukuba intlawulo ayenziwanga, kunokwenzeka ukuba ukuyenza akuyi kubuyisa nto.
Intlawulo eNtsha eKhankanyiweyo yokuNcedisa
Nje ukuba uthumele nasiphi na isibhengezo esongezelelweyo kwi-hacienda, uyakufumana isazisi sokufumana apho uya kuyazi imali ekufuneka uyihlawule okanye naluphi na uxanduva osenalo.
Kolu luvuma ungafunda umgca ekufuneka ihlawulwe ngawo, imali iyonke ekufuneka ihlawulwe kunye nomhla obekiweyo wokuhlawula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Umgaqo-nkqubo wezemali » Ingxelo yengeniso ehambelanayo
Ukunyuka kwexabiso lombane kuya kunyusa iinkampani zombane